Badedeliwe abasebenzi basemakhazeni abebeboshiwe | News24
Badedeliwe abasebenzi basemakhazeni abebeboshiwe
Kungesikhathi abasebeni bebhikisha ngesonto eledlule.ISITHOMBE : lethiwe makhanya
Laba basebenzi baphinde baveza ukuthi ngesonto eledlule kunabantu abagasele nezibhamu kulendawo basabisa abasebenzi ngoba befuna ukukhishelwa imzimba yabantu.
USihlalo we-Cosatu esifundazweni saKwaZulu -Natal uMnuz Skhumbuzo Mdlalose nobeyingxenye yalo mbhikisho uthe uDhlomo usejoyine uhlu lwabanye ongqongqoshe abahlulwa ukwenza umsebenzi esifundazweni saKwaZulu-Natal.
“Esikhundleni sokuthi akhombise ubuholi njengongqongqoshe uvele afune ukuphenduka azenze udokotela. Kunezidumbu la esezihlale kusukela ngo-2014 zihleli endaweni okungasiyona amakhaza ngoba iziqandisi azisebenzi.
Abasebenzi abahlanza indawo kanye nabashayeli bezimoto sebetshelwa ukuthi abahlanze izidumbu nokuyinto abangayifundelanga. Siyi-Cosatu sizokhipha isitatimende esishoyo ukuthi siyayeseka i-Nehawu kanti futhi sizoba nayo kuze kube uyadlula lomzabalazo wabo,” kubeka yena.
NgoLwesibili uMnyango wezeMpilo ukhiphe isitatimende ubonga inkantolo ngokunikeza isexwayiso sokuthi babuyele emsebenzini ngokushesha uma ngabe bengafuni ukuphinde baboshwe okanye baxoshwe.
“Umnyango uzobe usiqaphe ngeso lokhozi isimo kulama khaza. Sifuna ukuphinde sixolise futhi kumalunga omphakathi ngokubambezeleka abhekane nako ngenxa yokusebenza kwabasebenzi behudula izinyawo.Ngaphandle kwaloku umnyango uyaqhubeka nokuzibandakanya ekuxoxisaneni nezinhlelo zabasebenzi ekulungiseni izinkinga zabasebenzi.”
Usekela Nobhala weNehawu esifundazweni saKwaZulu-Natali uMnu Phakama Ndunakazi utshele i-Echo izolo (ngoLwesithathu) ukuthi bamatasa bayalela abasebenzi ngomthelela umyalelo wenkantolo onawo,
“Sekucacile ukuthi umqashi akazimisele ngokulungisa izinkinga zabasebenzi kanti futhi njengabaholi sesiyacasuka manje. Esikhundleni okuthi axoxisane nathi ugijima ubizela abasebenzi amaphoyisa uyababopha. Ubethi abasebenzi bazosebenza kanjani ekubeni azithatha zonke izinsiza kusebenza? Into esiyenzayo manje ukuthi sihlanganisa abasebenzi kanti futhi sizolandela umthetho wabasebenzi ukuba sibe nokhukhulela ngoqo wesiteleka esisemthethweni kodwa,” kubeka yena.